जीवन सुखमय बनाउन चाहनुहुन्छ ? हो भने मोटी युवतीसँग विवाह गर्नुहोस् – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Intresting/जीवन सुखमय बनाउन चाहनुहुन्छ ? हो भने मोटी युवतीसँग विवाह गर्नुहोस्
अध्ययन अनुसार, मोटी महिलाहरुसँग प्रेममा परेका पूरुष धेरै मुस्कुराउँछन् र जीवनको लागि उनको व्यवहार धेरै सकारात्मक रहन्छ । उनीहरु धेरै खुसी हुन्छन् । यति मात्र होइन, सेन्स अफ ह्युमर पनि एकदमै राम्रो हुन्छ